Kambodza " Journey-Assist- Inona no atao. Vola. Ny toetr'andro. toe-javatra
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Kambodza
Fampahalalana ankapobeny. Inona no tokony hatao any Kambodia
Ny toetrandro sy ny toetr'i Kambodza
Vola Kambodza. Fifanakalozana fifanakalozana. Bank sy ATM
Fiantsenana ao Kambodza. Seveniry
Sakafo sy sakafo tany Kambodza
Kambodza dia firenena fantatra amin'ny maha ivon'ny iray amin'ireo sivilizasiôna taloha indrindra. Tato ho ato dia niainany ny ady an-trano lava sy feno rà. Saingy izao i Kambodza dia lasa iray amin'ireo toerana kendrena indrindra amin'ny fampandrosoana ny fizahantany. Mihamaro ny mpitsangatsangana tonga eto hahafantatra ny tsangambato ara-tantara sy ara-kolotsaina mahaliana.
Inona no tokony hatao any Kambodia
Vao haingana kokoa, ny fitsangatsanganana mpizahatany any Kambodza dia natao ho fanampin-dian-tsambo ihany any Vietnam sy Thailand. Na izany aza, ankehitriny ny orinasa manolotra ny fizahan-tany feno any Kambodza. Indrisy, tsy mbola misy sidina mivantana avy any Rosia, Ukraine ary Belarus ho eto amin'ity firenena ity. Lasa sakana ho an'ny fampandrosoana ny fizahan-tany fizahan-tany izany. Na izany aza, ny mpizahatany izay mbola nahavita nitsidika an'i Kambodza dia mazàna dia tsy manenina ny dia ary matetika milaza ny faniriana hiverina any indray.
Talohan'izay, ny mpizahatany nitsidika indrindra an'i Siem Reap, Angkor sy Phnom Penh, fa any Kambodza ihany koa misy fialan-tsasatra amoron-dranomasina sy hetsika isan-karazany ao amin'ny Sihanoukville. Betsaka ny mpandeha no nahatsapa izany ho safidy tsara ho an'ny Thai Pattaya. Sihanoukville manana hotely iraisam-pirenena ampy.
Toetany sy toetrandro ao Kambodza
Ny toetr'andro tropikaly monsoon no manjaka ao Kambodza.
Firenena mafana dia mafana ity. Ny mari-pana dia manomboka amin'ny + 25 ... + 40. Ny volana mafana indrindra dia ny volana aprily, ary ny cool indrindra dia ny volana desambra.
Vanim-potoana any Kambodza
Manomboka eto amin'ity firenena ity ny vanim-potoanan'ny orana amin'ny volana Mey ary mifarana amin'ny Novambra. Mandritra io vanim-potoana io dia manjaka any Kambôdza ny rotsakorana atsimo andrefan'ny atsimo andrefana ary misy oram-baratra miaraka amin'ny oram-baratra, izay mitombo ny haavon'ny rano any amin'ireo fitahirizana ao an-toerana. Toy ny mahazatra, ny oram-be dia miseho mandritra ny andro, amin'ny tolakandro. Matetika maharitra 2-3 ora izy ireo.
Vanim-potoana maina - manomboka amin'ny Novambra ary mifarana amin'ny volana aprily. Io vanim-potoana io dia miavaka amin'ny fihenan'ny hafanan'ny rivotra sy ny hamandoana. Mahalana ny orana amin'izao fotoana izao. Ny vanin-taona maina dia mizara ho vanim-potoana mangatsiaka sy mafana kokoa. Ny voalohany dia manomboka amin'ny volana novambra ary mifarana amin'ny volana martsa. Ny faharoa dia manomboka amin'ny volana martsa ary mifarana amin'ny volana Mey.
Ny ankamaroan'ny Kambodza dia mahazo rotsakorana 750 - 1 mm isan-taona. Na izany aza, any amin'ireo faritra be tendrombohitra any amin'ny firenena dia mety misy hatramin'ny 500 mm na mihoatra aza. Misy orana 2 farafahakeliny isan-taona. Ny salan'isan'ny hamandoana dia 000%.
Fotoana tsara indrindra mitsidika an'i Kambodza
Ny fotoana tsara indrindra amin'ny fizahan-tany dia ny septambra ka hatramin'ny martsa. Ny volana sy volana janoary no volana tsara indrindra fivezivezena. Ny toetrandro amin'izao fotoana izao no tsara indrindra, tsy orana, ny mari-pana dia matetika amin'ny + 30 ... + 35, ambany ny hamandoana.
Na izany aza dia tsy dia ratsy loatra ho an'ny fizahan-tany ny orana, satria matetika tsy hita ny orana mandritra ny herinandro.
Cuaca marina any Kambodza sy ny famaritana telo andro
Ity ambany ity ny Widget ifanakalozana ahafahanao mahita ny toetrandro ankehitriny any Kambodza. Fidio izay sosona tianao (rivotra, orana, tadio, onja ary maro hafa). Ny habeo eto ambany dia ahafahanao mahita ny valan-toetrandro amin'ny andro ho avy.
Vola any Kambodza. Fifanakalozana fifanakalozana
Ny vola nasionalin'i Kambodza dia antsoina hoe riel. Ny riel 1 dia mizara ho 100 sous. Androany dia misy taratasim-bola mivezivezy miaraka amin'ireto antokom-pinoana manaraka ireto: korontana 50, 100, 500, 1, 000, 2, 000, 5, 000 ary 10. Vola madinika misy antokom-pinoana 000, 20, 000 ary 50 koa no ampiasaina.
Inona ny vola tokony ho any Kambodza
Tokony ho tsaroana fa ny vola Kambodiana dia tsy voatonona na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao, na any Kambodza aza sy any amin'ireo firenena Azia Atsinanana mifanakaiky. Raha ny marina dia ny vola amerikan'ny fandoavan-tena eto amin'ity firenena ity dia dolara amerikana.
Ny vidiny eto dia voatonona hatraiza hatraiza na dolara na mitovy dolara sy rotaka. Mandritra izany fotoana izany, ny fanovana dia azo omena ihany koa amin'ny dolara sy ny rotaka.
Raha manontaniana ianao hoe iza amin'ireto vola ireto izay tianao ny hahazo fanovana, dia tsara kokoa ny mifidy dolara. Misy dikany ny manondrana korontana avy any Kambodza ho an'ny famoriam-bola sy ho fanomezana, satria tsy ekena ho takalony tanteraka na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao, eny fa na amin'ny firenena manodidina aza.
Fifanakalozana fifanakalozana amin'ny vola any Kambodza
Misy dikany ny fifanakalozana korontana amin'ny vola kely fotsiny amin'ny fividianana kely. Ho an'ny fandoavam-bola dolara, alohan'ny handehanana any Kambôdza, manangona vola dolara marobe miaraka amina antokom-pivavahana kely - 1, 5, 10. Marihina fa amin'ity firenena ity, ny faktiora amerikana taloha, izay tsy ekena any amin'ny firenen-kafa, dia ekena matetika handoavana sy hatakalo nefa tsy misy olana ... Na izany aza, tokony ho ao an-tsaina fa tsy maintsy manary ny vola toy izany ianao alohan'ny handaozanao an'i Kambodza, satria any amin'ny firenena sisa any Azia Atsinanana sy izao tontolo izao amin'ny ankapobeny dia tsy hividy na inona na inona ianao amin'izany ary tsy hatakalo na aiza na aiza.
Euro sy dolara
Indraindray ianao dia afaka mandoa ny euro, fa ekena kosa izy ireo fa mora an-tsitrapo noho ny dolara. Any amin'ireo faritra sisin-tanin'i Kambodia, baht Thai, donges Vietnam ary Lao bales dia ekena koa tsy misy olana.
ATM ao Kambodza
Raha tonga any Kambodza ianao, tsy misy vola mendrika dia mahavita misintona azy ireo any amin'ny ATM any amin'ity firenena ity. Ao Kambodza, tena ampy izy ireo ary ny vola avy amin'ny ATM eto dia voaroaka amina dolara. Marina, somary mahamenatra ny fameperana: ny ankamaroan'ny ATM dia manisa mihoatra ny $ 400 miaraka amin'ny fanalana tokana.
Kajy amin'ny karatra plastika
Ny fandoavam-bola karatra eto amin'ity firenena ity dia tsy mbola azo atao. Ny sahan'ny fandoavam-bola dia saika mihidy ihany amin'ny trano fandraisam-bahiny lafo sy amin'ny toeram-pivarotana lehibe vitsivitsy.
Amin'ny mpivarotra dia ekena na aiza na aiza ny dolara amerikana sy ny euro. Birao fifanakalozana maro no manaiky ihany koa ny pounds sy vola anglisy an'ny firenena aziatika mifanila aminy - Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar, China, Japan. Misy ny mpanakalo ao Phnom Penh izay manaiky robla rosiana, saingy amin'ny taha ratsy kokoa.
Fiantsenana ao Kambodza
Ao Kambodza, tsy dia misy firy akory ny fivarotana amin'ny endriny mahazatra ho anay ary vitsy ny toeram-pivarotana.
Saika ny trano fivarotana lehibe rehetra dia ao Phnom Penh sy Siem Reap. Any Kambodza, dia mahalana ny mahita vokatra marika malaza eran-tany amidy. Na izany aza, ny replicas tena manara-penitra avo lenta dia amidy eto, indraindray tsy mitovy amin'ny niaviany.
Tokony hitandrina ianao rehefa mividy entana amin'ny sokajy sasany. Ohatra, tsy mendrika ny mamitaka ny tenanao amin'ny vidin'ny elektronika ambany indrindra. Rehefa dinihina tokoa, hisy fitaovana ara-teknika novidiana amina vitsivitsy dolara hofoanana aorian'ny andro vitsivitsy.
Any Kambodza, mahita asa-tanana momba ny kalitao avo lenta ianao. Anisany voalohany indrindra, lamba landy sy landy dia tokony hojerena tsara.
Iray amin'ireo toerana fiantsenana tsara indrindra any Kambodza ny Phnom Penh Central Bazaar. Any akaikin'ny fefiloha Sisovat no misy azy.
Ivontoerana ara-barotra maoderina kokoa dia ny toeram-pivarotana Sorya, izay hita ao an-drenivohitra ihany koa. Ity tranobe ity dia manana toeram-pivarotana lehibe sy trano fisakafoanana haingana.
Souvenir avy any Kambodza. Inona no hividy?
Ny sakafo ao an-toerana dia tena mitovy amin'ny Vietnamianina, Thai, Lao ary shinoa. Saingy na izany aza, ny fahandroana Kambodziana (Khmer) dia misy fahasamihafana vitsivitsy. Indrindra indrindra, dia tsy dia be ny hazandrano noho ny ao an-dakozia firenena manodidina, ary tena mamy. Toa an'i India dia tena be mpitia ny vanim-potoana karier any Kambodza. Ny kofam-bary samy hafa dia mampanakaiky ny sakafo Khmer hanakaiky ny Shinoa. Toa an'i Laos, mofo matsiro tsara dia nendasina any amin'ny toerana rehetra ao Kambodza amin'ny fampiasana teknolojia frantsay.
Lasopy isan-karazany miorina amin'ny broths azo avy amin'ny hena sy trondro no tena malaza. Betsaka ny zava-manitra, ny fakany ary ny legioma no ampiana ao. Mandritra izany fotoana izany dia ampiana trondro indraindray ny trondro ary ny mifamadika amin'izany. Soup no lovia lehibe indrindra amin'ny mponina faran'izay mahantra ao Kambodza.
Trondro sy hazan-dranomasina betsaka no laniana eto amin'ity firenena ity. Samy hafa be ny lovia trondro. Ohatra, dtrai-chin-nyung - lasopy marikivy, nom-trai - trondro namboarina nasiana vary, dtrai-aing - trondro nendasina, dtrai-chorm-hoi - trondro steak, amok - trondro misy saosy miorina amin'ny ronono voanio, nyokmam - saosy trondro (maro samihafa ny karazany fantatra azy) sy prohok - paty vita amin'ny trondro, izay zahana amin'ny fomba miavaka (misy karazana prohok maro karazana).
Ny vary dia matetika no atao lovia, nefa misy ihany koa ny lovia feno - ohatra, un-som-chro - vary nendasina miaraka amin'ny henan-kisoa sy soja, un-som-che - vary misy akondro, baicha - vary misy hazan-dranomasina, trondro ary / na hena. Izy ireo koa dia manamboatra karazana "gouvernis" avy amin'ny ravina volotsangana feno vary.
Ho an'ny salady, soso-kevitra ny Khmer paw, misy tapa-henan'omby, hena, voasarimakirana, saosy trondro, tongolo lay, mint, basil aziatika, dipoavatra maitso ary tsaramaso maintso. Ity lovia ity dia asiana zava-manitra antsoina hoe khul sy sakay betsaka.
Teny ofisialy - Khmer
Renivohitra - Phnom penh
Karazana governemanta - monarchie parlemantera
Fivavahana ofisialy - Bodisma
Kaody finday: 855 +